नर्भिकका डाक्टरले विरामीको देब्रे खुट्टा चिर्नुपर्नेमा दाहिने चिरे ,लापरवाहीको नि हद हुन्छ नि ! - Tamang Online
खेलकुद सघं इजरायल गठन,संयोजकमा सुन्दर नेपाल चयन इजरायलमा ह्योल्मो सोनाम लोसार २१४९ ‘छ्यु ता ल्हो’ भव्यताको साथ मनाउने प्रवासमा रहेका नेपालीलाई नेकपा(एमाले)अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश सम्बोधन गर्ने तामाङ समाज कतारको नवौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा शुबास तामाङ सर्वसम्मत चयन अष्ट्रेलियाकै पहिलो नेपालीमुलकी काउन्सिलर भद्रा वाइबाले तामाङ भेषभूषामै लिईन् शपथ ग्रहण इजरायलमा सोनाम ल्होछार २८५८ च्यान ल्हो भव्यताको साथ मनाउने तयारी इजरायलमा माघ्या सकराटि भव्यताको साथ् मनाउने एनआरएन इजरायलले बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै इजरायल घेदुङको सातौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा पेमा लामा पाख्रिन तामाङ चयन इजरायलमा चासोक तङ्नाम (उधौली/न्वागी पुजा ) येले तङ्बे ५०८१ भव्यताको साथ मनाउने इजरायलमा राष्ट्रिय पर्व तमू ल्होसार २०७८ भव्यताको साथ मनाउने नेफिन दक्षिण कोरियाको अध्यक्षमा विक्रम राना निर्बिरोध चयन नेपाल तामाङ घेदुङ कुवेतको छैटौं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा नाराण ग्लान तामाङ निर्विरोध चयन तामाङ समाज स्पेनको अध्यक्षमा अजय लोप्चन तामाङ इजरायलमा पाँचौ संस्करणको वलिहाङ कप २०२१ फुटबल खेल हुदै
नर्भिकका डाक्टरले विरामीको देब्रे खुट्टा चिर्नुपर्नेमा दाहिने चिरे ,लापरवाहीको नि हद हुन्छ नि !
काठमाडौं, फागुन १२ – मानवीय त्रुटिका नाममा कसैले कतिसम्म लापरवाही गर्न मिल्छ ? अझ नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने चिकित्सकको लापरवाही कतिसम्म स्वीकार गर्ने । भगवानको रुपमा हेरिने चिकित्सकको हातमा हरेक नागरिकको जीवन अडिएको हुन्छ । भगवान सरहका डाक्टरको पूर्ण विश्वासमा साथ विरामी र विरामीका आफन्तले कसैको जीवन उसैको भरमा छाडछन् ।
अति संवेदनशिल पेशाको रुपमा रहेको यो डाक्टरी पेशामा हुने सानो लापरवाहीले कसैको जीवन तथा घरपरिवार नै तहसनहस हुनसक्छ । यस्तै संवेदनशील कार्य भएका कारण नै यो पेशा अँगाल्नेलाई आम नागरिकले भगवान मानेका हुन् । हो प्रयास गर्दागर्दै भवितव्य आउने कुरालाई सजिलै स्वीकार गर्न सकिन्छ तर प्रयास नै गलत भैरहेको छ भने त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने ? भूलवश हुन गएको भन्दै कहिलेसम्म अस्पताल प्रशासनसम्म धाउने विरामीका आफन्तले ? कहिले विरामीको पेटमै कैँची त कहिले कपडा, कहिले एउटा हातको अपरेशन गर्नुपर्नेमा अर्कै हातको अपरेशन । यस्ता घटनाहरु बारमबार दोहोरिरहेका छन् । त्यो पनि देशकै सुविधासम्पन्न कहिलएका अस्पताल तथा वरिष्ठ भनाउँदा चिकित्सकहरुबाट ।
फेरि यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ नर्भिक अस्पतालको लापरवाहीको । भगवान मानिएका चिकित्सकको गम्भीर लापरवाही काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा देखिएको छ । नर्भिक अन्तराष्ट्रिय अस्पतालका डाक्टरले उपचारका क्रममा देब्रे खुट्टा अपरेशन गर्न भन्दै भर्ना भएकी विन्दु पौडेलको दाहिने खुट्टाको घुँडाको अपरेशन गरेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ८ की ३८ वर्षीया पौडेल लिगामेन्ट च्यातिएका कारण उपचार गर्न नर्भिक अस्पताल जानुभएको थियो । देब्रे खुट्टाको लिगामेन्ट च्यातिएर राम्रो उपचारका लागि भरतपुरबाट काठमाडौं आउनुभएकी पौडेलले डाक्टरको लापरवाहीका कारण दुःख पाउनु भएको छ । त्यति मात्रै होइन, एउटा खुट्टाको उपचार गराएर निको भएर फर्कने आशामा काठमाडौं आउनुभएकी उहाँलाई अब अर्को खुट्टको समेत उपचार गर्नु पर्ने भएको छ । खुट्टाको लिगामेन्ट अपरेशन सायद हतारमा गर्नुपर्ने अप्रेशन थिएन होला ।
अपरेशनको जिम्मेवारी लिएका डाक्टर पनि अपरेशन कक्षमा खासै हतारो देखाउनुपर्दैन होला ! आँखा चिम्लेर जहाँ पायो त्यही चिर्नुपर्ने । अपरेशन कक्षमा रहेको टीमले सल्लाह गरेर विरामीलाई ठूलो असर नपर्ने गरेर खतरामुक्त समयमा विरामीको अपरेशन गर्नुपर्ने नर्भिक अन्तराष्र्टिय अस्पतालका डाक्टर प्रविण नेपालले भने कतिसम्मको लापरबाही देखाउनुभयो, विरामीको विमार नै मेसो नपाइ देब्रे खुट्टाको साटो दाइने खुट्टा चिर्नुभयो । अझ कतिसम्म व्यस्तता डाक्टरको भने विरामी समस्या लिएर एकैछिनमा भेटन जाँदा डाक्टर त निस्किसक्नुभएको रहेछ ।
आफूले अपरेशन गरेको विरामीको अपरेशनपछि स्वास्थ्य अवस्था कस्तो होला भनेर उहाँ फलोअपको लागि पनि अस्पतालमा बस्नुपर्ने कि नाइँ ? चरम लापरवाही देखिएको छ नर्भिक अस्पताल र डा. प्रविण नेपालको ।
हाम्रो नीति नियम पनि अजिव छ । एउटा खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्ने ठाउँमा समस्या नै नदेखिएको खुट्टामा अप्रेशन गर्ने डाक्टरलाई अस्पतालले पनि सहजै छुटकारा दियो । यो घटनामा विरामीका आफन्तले पनि गम्भीर लापरवाही देखाएका डाक्टरलाई सम्झौतामा नै छाडे । त्यो पनि दुवै खुट्टाको उपचार निःशुल्क गर्ने सहमतिमा ।
जिम्मेवार संस्थाले गम्भीर लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई बर्खास्त गर्नुपथ्यो की नाइँ ? अनि अस्पताल प्रशासनले पनि लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारवाही गर्ने कि विरामीका आफन्तलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर घटनाको ढाकछोप गर्ने ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
संवेदनशील पेशामा आवद्ध डाक्टरले विरामीको उपचारमा लापरवाही गर्दै जाने अनि विरामीको मृत्यु भएमा पनि त्यस्ता डाक्टरलाई छाडदै जाने हो भने नेपालको स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास कहाँ पुग्छ ? कहिलेसम्म डाक्टर र अस्पतालका मानवीय त्रुटिलाई सर्वसाधारणले सहँदै जाने ? उज्जायालो अनलाइनबाट
« नयाँ शक्ति पार्टीको नाम फेर्ने निर्णय, बाबुराम पुनः संयोजक चयन,प्रवास प्रदेशको इन्चार्जमा हिसिला यमी (Previous News)
(Next News) कांग्रेस बैठकमा देउवा र सिंहबीच चर्काचर्की,राष्ट्रपतिप्रति आपत्ति »
खेलकुद सघं इजरायल गठन,संयोजकमा सुन्दर नेपाल चयन
इजरायलमा ह्योल्मो सोनाम लोसार २१४९ ‘छ्यु ता ल्हो’ भव्यताको साथ मनाउने
प्रवासमा रहेका नेपालीलाई नेकपा(एमाले)अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश सम्बोधन गर्ने
तामाङ समाज कतारको नवौँ अधिवेशनबाट अध्यक्षमा शुबास तामाङ सर्वसम्मत चयन
अष्ट्रेलियाकै पहिलो नेपालीमुलकी काउन्सिलर भद्रा वाइबाले तामाङ भेषभूषामै लिईन् शपथ ग्रहण
तेलअविव - इजरायलमा बसोवास गर्नुहुने नेपाली भाषी खेलाडीहरुले 'खेलकुद युवा... बाँकी यता